Safirka Dawlada Somaliya ee Konfurta Sudaan oo Kulan la qatay Ganacsatada Ku Sugan Konfurta Sudaan – SBC
Safirka Dawlada Somaliya ee Konfurta Sudaan oo Kulan la qatay Ganacsatada Ku Sugan Konfurta Sudaan
Posted by Webmaster on August 12, 2012 Comments
Kulankan oo ahaa Mid afura oo uu ganacsatada u sameyeey Safirka Dawlada Somaliya Ufadhiya Konfurta Sudaan Ambasador Cabdiraxmaan Dinaari ayaa Ka dhacay Holka Shirarka ee safarada Somalida waxana kasoo qayb galay Inta Badan Ganacsatada Somalida ee Kusugan Magalada Juba ee Konfurta Sudaan jaliyada somalida Gudomiyaha Ardayda Somaliyeed ee Konfurta Sudaan Safirki Hore ee Somalia u fadhiyeey Konfurta Sudaan ahna ku Xigeenka safirka Maxamed Cismaan Maxamed Xoog Hayaha Guud ee Safarada Somaliya Konfurta Sudaan.
Ugu Horayn Waxaa kulanka ka hadlay Safirki Hore ee Somalia u fadhiyeey Konfurta Sudaan ahna ku Xigeenka safirka Maxamed Cismaan Maxamed Waxaana uu ka hadlay qabki lagu dhisay safarada isagona u mahadceliyeey Ganacsada somaliyeed ee hirgaliyeey dhismaha safarada somaliya waxana uu sido kale ka hadlay wax qabadka safarada mudadi yarayd ee ay furayd isagoona Xusay in dadka ay u qabteen adeegya Muhiim u ah Noloshoda.
Intasi ka dib waxaa hadalka qatay Ambasador cabdiraxmaan Dinaari waxaana uu Mahad Balaran ujediyeey Ganacsatada iyo dhamaan dadki kulanka kasoo qayb galay waxana uu shegay in kulankaan uu yahay mid isbarasho oo uu sameyeey Ganacsada islamarkana uu donayo in ganacsatada ay isbartaan isagona xusay safarada ay u tagantahay ushaqaynta Bulshada Somaliyeed ee ku sugan konfurta sudan.
Ambasador cabdiraxmaan Dinaari Ayaa shegay in dadka Somaliyeed ee ku sugan konfurta sudan ay yihiin dad isku Xiran islamarkaana leh wada shaqayn wanagsan Waxana uu Tusale usoo qatay jaliyada ay dhisteen oo ah Mid ay ku midaysan yihiin iyo waliba dhismaha safarada oo ay Ganacsatada ka wada qayb qateen.
”..Aniga Halkaan waxaan jogay Mudo koban waxaan arkay in dadka somaliyeed ay yihiin dad isku Xiran Tusale jaliyada halkaan malahan kala qaybsanan waa dad isku duban.”ayuu Yiri Ambasador Cabdiraxmaan Dinaari .
Dinari ayaa soo hadal qaday Xalada ka jirta Somaliya waxana u ilahay uga Baryeey in uu dhamatada uu ka dul qado shacabka somaliyeed ee ay la degtay dhibatada dabada dheratay isagona shegay in dadka somaliyeed ay Bahi wayn u qaban sidi ay u helilahayeen dawlada Wanaagsan.
Qaar ka Mid ah Ganacsatada oo Goobta ka hadlay ayaa shegay in ay ku faraxsanyihiin kulankaan isbarashada ah ee uu sameyey safirka waxana ay shegeen in ay la shaqenayaan safirka cusub igona sido kale u mahad celiyeey Safirki Hore oo ay lasoo shaqeyen.
Kulanka ayaa kusoo Gabagaboobay jawi dagan waxaana lafilaya in ay siisocodaan kulamada Nocan ah oo ay wada qadanayaan Safirka Dawlada Somaliya Ufadhiya Konfurta Sudaan iyo qaybaha kala duwan ee Bulshada somalida ee ku sugan konfurta sudaan.
Dalka Konfurta Sudaan
mahamud sacid yahye says:
waxaan umahad ganac satada
iyo shacabka somalia oo
degan Konfurta Sudaan
waxaan leeyahay noqda kuwo